डेंगु संक्रमण बढ्दै, यस्तो छ चिकित्सकको सुझाव
Fri, Feb 28, 2020 at 1:34pm
दिल्ली हिंसाः ४२ को मृत्यु, २ सय भन्दा बढि घाइते #आहा खबर# प्रम ओली र नेता नेपालबीच भेटवार्ता : पार्टीका आन्तरिक विषयमाथि छलफल #आहा खबर# शनिबार नेपाल मलेसियासँग भिड्दै, यस्तो छ हेड टु हेड अवस्था #आहा खबर# इरानमा कोरोनाका कारण ३४ व्यक्तिको मृत्यु #आहा खबर# प्रधानमन्त्रीलाई नेता नेपालले दिए चेतावनीयुक्त सुझाव #आहा खबर# चक्रपथ सडक विस्तारकाे जिम्मा चिनियाँ टोलीलाई #आहा खबर# अर्बाैं लगानी भएका अलपत्र सयौं ठेक्कालाई फेरी म्याद थप #आहा खबर# तेजाब प्रहार गर्नेलाई जरिवाना सहित आठ वर्ष कैद #आहा खबर# दिल्ली हिंसामा ज्यान गुमाउनेको संख्या ३५ पुग्यो, मुस्लिम समुदाय त्रासमा #आहा खबर# प्रियंका र आयुष्मानले गरे बिहे #आहा खबर# संसदबाट किन भाग्‍ने ? सबै जवाफ दिन तयार छु : प्रधानमन्‍त्री ओली #आहा खबर# कर बढे पनि पेट्रोल र डिजेलको मूल्य नबढ्ने #आहा खबर# साहित्य महोत्सव धनगढीमा विश्वभरिका नेपालीभाषी साहित्यकारहरूकाे जमघट #आहा खबर# बानेश्वरकाे भव्य विवाहमा दुलाहानै नआएपछि मच्चियाे हल्लीखल्ली #आहा खबर# बिहीबार सार्वजनिक बिदा #आहा खबर#
मंगलवार, २४ भाद्र २०७६,	आहाखबर	1.7K
सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुनले डेंगु हुँदैमा आत्तिन नपर्ने बताए । डा. पुनले लक्षण देख्नासाथ अस्पताल पुगेर परिक्षण गरी औषधि सेवन गरे यो रोग सहज रूपमा निको हुने बताए । उनले भने, ‘शरीरका जोर्नीहरूको दुखाइ अत्यधिक हुन्छ । ८/१० दिनसम्म पीडा हुन्छ, धेरैजसो संक्रमित हुने मात्रै हो । तर, आत्तिनुपर्दैन ।’ डा. पुनका अनुसार डेंगु संक्रमण गराउने लामखुट्टे बिहान ९ देखि १२ र दिउँसो ३ देखि ७ को बीचमा मात्रै बढी सक्रिय हुने बताए ।
डेंगुको प्रकोप फैलिँदै गए पनि सरकारले भने रोकथामको लागि प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्न सकेको छैन । सरकारले नियन्त्रणका लागि बजेट छुट्याए पनि सो रकम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । रोकथामका लागि सरकारले १० करोड मात्रै विनियोजन गरेको छ जुन निकै न्यून हो । स्थानीय तहका लागि १ करोड ६७ लाख, प्रदेशका लागि ६ करोड १७ लाख र केन्द्रका लागि १ करोड ८० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । सो रकम ‘खोज र नष्ट गर’, जनचेतना अभियानका लागि खर्च भइरहेको महाशाखाले जनाएको छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभागका अनुसार पछिल्लो दुई महिनाको अवधिमा ५६ जिल्लाका ३ हजार ८९९ जनालाई डेंगु संक्रमण भएको छ । अहिलेसम्म ६ जनाको ज्यान गइसकेको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाका निर्देशक डा. विवेककुमार लालका अनुसार यो संख्या अझै बढ्ने देखिन्छ ।
अहिलेसम्म प्रदेश नम्बर १ मा ८३१, प्रदेश २ मा ३९, प्रदेश ३ मा २०१०, गण्डकी प्रदेशमा ८९६, प्रदेश ५ मा ९७, कर्णाली प्रदेशमा ३ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २३ जना डेंगुबाट संक्रमित भएका छन् । अहिलेसम्म सुनसरी, सिन्धुपाल्चोक र चितवनमा डेंगुको संक्रमणबाट एक÷एक जना र काठमाडौंमा दुई जनाको ज्यान गएको महाशाखाले जनाएको छ ।
डेंगु ज्वरो एडिस जातको लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने एक प्रकारको सरुवा रोग हो । डेंगुको भाइरसबाट संक्रमित लामखुट्टेको टोकाइले यो रोग सार्छ । यो लामखुट्टेले विशेषगरी दिउँसो मात्र टोक्ने गर्छ । बर्सातको समयमा सुरु भएपछि डेंगु ज्वरोको प्रकोप बढ्न थाल्छ । राजधानीबाट